8 Mhando dzeKuteerera Dzinoshandiswa Nevanhu - Blog
Kuteerera kunoratidzika kunge kuri nyore, handiti?
Iwe unongo vhura nzeve dzako (nenzira yekufananidzira) uye teerera.
Asi pane chaizvo mhando dzakasiyana dzekuteerera.
Kukurukurirana pachedu kunogona kusiyanisa zvakanyanya, kubva pane mutauro wemuviri kusvika kutaura kusvika kukurukurirana kweboka.
Nzira yatinoteerera nayo vanhu inotaura zvakawanda nezve manzwiro avanoita nezvavo, saka zvakanaka kuti tizive nezvezviratidzo zvatiri kupa.
Heano marudzi 8 ekuteerera iwe aunofanirwa kuziva nezvazvo.
1. Kusarura Kuteerera
Rudzi urwu rwekuterera rwunoita zvarinotaura pachitini - tinonzwa zvinhu zvinosimbisa zvatagara tichifungidzira, maonero, kana zvatinotarisira.
Tinonzwa zvatinoda kunzwa… zvatinofunga isu kunge kunzwa.
Uye isu tinoita izvi tisingazivi, tisingatombozviziva.
Izvi zvinokonzerwa nezvinhu zvakasiyana siyana uye zvinowanzoitika munzvimbo yebasa kana hukama hwehukama uko kunetsekana nemanzwiro zvinosanganisirwa.
Semuenzaniso, tinofunga kuti tinonzwa vatenzi vedu vachitaura chimwe chinhu nekuti isu tiri kutotarisira kuti vazotaura, kungave kuri kwekupedzisira kana kurumbidza.
apo mumwe munhu anoita kuti unzwe kunge benzi
Uye kune zvakawanda zvinhu zvinogona kukanganisa izvo zvatinofunga zviri kutaurwa.
Yedu yekutanga kutonga kwemunhu kana mamiriro anogona kukanganisa manzwiro atinoita nekududzira zvinhu.
Maitiro anoita mumwe munhu, matauriro ezwi, uye zvimwe zvinhu zvinogona kukanganisa izvo zvatinofunga kuti vachataura, uye isu tinofanotungamira kutaura kwavo chaiko nezvatinotarisira.
2. Kunzwira Tsitsi Kuteerera
Zvekare, izvi zvinotsanangudza zvakanaka, asi zvakare iri fomu yakakosha yekuterera!
Kuteerera kunonzwira tsitsi ndiyo nzira yedu yekuratidza kuti tinonzwisisa zviri kutaurwa nemunhu uye kuti zviri kumukanganisa sei.
Zvinoratidza kuti tine hanya navo.
Iyi mhando yekuteerera yakajairika pakati shamwari dzepedyo , vatinoshanda navo, uye nhengo dzemhuri.
Inobatana zvakanyanya padhuze nemitauro yemuviri, saka unogona kuona misoro, kugomera, uye kugutsurira musoro.
Dambudziko nerudzi urwu rwekuteerera nderekuti inogona kunyengedzwa zviri nyore kana kuiswa mudanho. Sezvo isu tese tichiziva zvekutarisira kubva kuvanhu kana ivo vari kunzwira tsitsi, zviri nyore kudzokorora izvi.
3. Kuteerera Kunonzwira Tsitsi
Izvi zvakanyatsofanana nekuteerera kunonzwira tsitsi, asi zvinotora zvinhu kusvika padanho nyowani.
Panzvimbo pekutarisa semucherechedzi uye kunzwa nokuti munhu wacho (kungave kusuwa, kutsamwa, kana mufaro!), vateereri vanonzwira tsitsi vanonzwa manzwiro avo pachavo.
Ichi chiratidzo chehukama hwepedyo kana hukama - kunzwa kurwadziwa kwemumwe munhu kana mufaro kuvada uye kuva nehanya navo zvakanyanya.
Inogona kuve yakanyanyisa pane dzimwe nguva uye inogona kunyatso kuremera kumuteereri kana vakasangwarira.
Aya maitiro ekuteerera anozivikanwawo se Kurapa Kuteerera , uye nezvikonzero zviri pachena.
Nekuzviisa isu mune shangu dzemumwe munhu, isu tinokwanisa zvirinani kuvabatsira kuburikidza nemamiriro avo ezvinhu.
Izvi zvinotibvumidza isu kuti tipe vhezheni yerapi kwatinofamba munhu kuburikidza nezvose zvavari kusangana nazvo sekunge tiri kuzvionera pachedu.
Izvi zvinoreva kuti tinogona kupa mazano akaenderana, pasina kuita mitongo , uye nekupa mazano ezvedu zvatingaite.
Kuteerera kwakakomba kunosanganisira izvo chaizvo - kushoropodza pamusoro pezviri kutaurwa, kutora zvidimbu zvakakosha uye kuita mutongo pazvinenge zvichidikanwa.
Chaizvoizvo, urwu rudzi rwekuteerera rwakakura mubhizinesi renyika - zvinobatsira vateereri kusvika padanho nekukurumidza uye nekuchengetedza zvinhu zvakagadziriswa uye zvinoshanda.
Nekushandisa kuteerera kwakakomba sehunyanzvi, tinogona ita sarudzo nekukurumidza pamwe nekuuya nemhinduro kumatambudziko uye kuongororwa kwemamiriro ezvinhu nekukurumidza.
'Zvakakosha' zvinowanzove zvine chirevo chisina kunaka, asi muchirevo chechinyorwa chino, zvinongoreva kucheka kuburikidza nezviri kutaurwa kusimudza zvakakosha, zvikamu zvakakosha.
Uhu hunyanzvi hukuru hwekudzidza kana zvasvika pamisangano yebhizinesi, chero chinhu chinosanganisira zvemari, uye chero mhando yemhando yepamusoro-yekushushikana.
Nekutora muchikepe ruzivo rwakanyanya kukosha kubva pane zvinotaurwa nemumwe munhu, tinogona kudzidza kusvika pamhedziso nekukurumidza uye nyore.
'Critical' zvinorevawo kuongorora zviri kutaurwa uye kutora zvimwe zvinhu nekatswanda kemunyu. Zvinotoda isu kuti titsvage chokwadi pakati peruzha rwemaonero uye kuwedzeredza.
Kuteerera kwakakomba chikamu chakakosha cheiyo nzira yekufunga kwakakomba .
Nzira Yokuchengeta Nayo Kukurukurirana Ichienda: 12 Nzira Dziviriro Dzakashata Zvinyararire
5. Informational Kuteerera
Izvi zvese ndezve kutarisisa kune ruzivo rwuri kuendeswa nemutauri.
Izvo zvakafanana nekuterera kwakakomba mukuti isu tinochengeta zvikamu zvakakosha kwazvo, asi zvakasiyana pakuti tiri kuzviita kuitira kuti tidzidze pane kugadzirisa hurongwa.
Informational kuteerera inzira yedu yekudzidziswa kuburikidza nekutaura - isu tinoteerera kunhau kana kuenda kumakirasi kuti tidzidze zvinhu kuti tiwane ruzivo rutsva uye nzwisiso.
Rudzi urwu rwekuteerera kazhinji runosanganisira zvinoshanda kana zvemukati zvemukati.
Kudzidza kuburikidza nekunzwa kunoda kutariswa munzira idzo dzimwe mhando dzekuterera dzisingaite - ndezvekuwanda kwekutarisa pane zvirimo pane kupa rairo, kutarisa zviwanikwa zvemuviri, kana kuve nekunzwisisa kwakadzama kwemweya
Vanhu vanoshandisa iyi mhando yekuteerera zvakanyanya vanowanzo kudzidza pane imwe nhanho (mudzidzi wepachikoro chepamusoro, vadzidzi veyunivhesiti, nezvimwewo) kana kushanda munzvimbo yebhizinesi.
ziva kana musikana achikuda
Kana iwe uri kuenda kumusangano uye urikudzidza nezve chitsva chigadzirwa kuvhura kana kushambadzira mushandirapamwe, iwe ungangove uri kushandisa musanganiswa wekuziva uye wakakomba kuteerera.
Paunenge uri kutarisa pane zvaunogona kudzidza nekunzwa, ungangove uri kutora zvinyorwa zvepanyama uye kutarisisa kune mutauro wemuviri, futi.
Kuvandudza hunyanzvi hwako hwekuteerera hunyanzvi inzira huru yekuzvimisikidza pachako kana iwe uchinge watanga basa idzva, kutanga chiitiko chitsva chedzidzo, kana kufarira kuita zvimwe zvekuzvisimudzira zvidzidzo zvakapoteredza zvinhu zvinokufadza chaizvo.
6. Kuteerera Kunoonga
Uyu ungave mutoo watinofarira kuteerera…
Chokwadi, tinoda kuva nehurukuro dzakadzama uye dzine chinangwa, uye isu tese tiri kudzidza chimwe chinhu chitsva kubva kuchazvino zvisikwa zvinyorwa, asi kuteerera kune chimwe chinhu chemafaro kunoshamisa.
Zvinogona kunge kuti zvimwe zvidimbu zvemimhanzi zvinonyatso kusimbisa manzwiro ako, kana kuti mawairesi aunofarira ari chikamu chetsika yako yemangwanani inokumisikidza zuva rakanaka.
Rudzi urwu rwekuteerera runogona kuitwa uri wega kana nevamwe vanokoshesa vese chero chaunofarira.
Izvi zvinowanzoitwa kunze kwemaawa ebasa, nevanhu vazhinji vachinakidzwa nemadhirama radio paSvondo masikati ane husimbe kana mimhanzi inorarama neChishanu manheru!
7. Kuteerera Kusarudza
Ichi chinofanira kunge chiri chimwe chinhu chatakapomerwa mese munguva yakapfuura, asi haisi mhosva yedu nguva dzose.
Sarudzo yekuteerera zvinoreva kuti isu tinongonzwa zvatinoda kunzwa uye kazhinji tinoteedzera kune zvimwe zvinhu nekuti tinozviona zvisina basa kana kufinha!
enzo uye cass mbichana kutanga
Kunze kwemarudzi ese ekuteerera, iyi ingangove yega inogona kuve nerevo dzakaipa. Iyo inoratidza kunetseka nekutaurirana, kunzwira tsitsi, kana kuteerera.
Kana iwe kazhinji uchizviwana iwe uchikukurwa kubva mukukurukurirana, zvinogona kunge uri kunetseka nekunzwa kusarudza.
Ita nepaunogona napo kunyatso tarisa pane zviri kutaurwa, kunyanya mune zvakakosha zviitiko senge misangano yebasa, kubvunzurudzwa kwebasa, uye nguva apo avo vari padhuze newe vari kukuudza mukati mako nezvechimwe chinhu chega kana chinogumbura.
8. Rondedzera Kuteerera
Isu takafunga kuti tinopedzisa pane yakakwira noti ine mutoo wekuteerera uyo wakanaka chaizvo uye wakanaka.
Kuteerera rapport kunosanganisira akati wandei emastaera atambotaura, asi zvinotora zvinhu kune rimwe danho.
Rudzi urwu rwekuteerera ndirwo rwatinoshandisa patiri kuyedza kuvaka hukama.
Isu tinonyatsoda kubatana nezviri kutaurwa. Kuratidza kufarira kukuru uye kugadzirira kupindura nechimwe chinhu chakakodzera.
Mhinduro dzedu dzinofanirwa kuenderana kune chero ari kutaura uye dzinoenderana netoni yehurukuro.
Mushure mezvose, kutaurira majee inzira huru yekuvaka hukama, asi hazviwanzo kukodzera kana isu tichiedza kuvaka hukama mumusangano wakakomba webhizinesi!
Vazhinji vedu tinoshandisa chimiro ichi zuva rega rega, kubva kunzvimbo yebasa kuenda kumabiko evatengi kusangana nevanhu vatsva pahusiku kana panhandaro.
Nekuratidza kuti tiri kufarira zviri kutaurwa, tinogona kugadzira chisungo chakasimba kune wese arikutaura uye titange kuwana kuvimba kwavo.
Izvi zvinotungamira kuhukama hune hutano, hunofadza uye kuremekedzana kune vese vanobatanidzwa - anogara ari mukundi!
Aya angori mamwe emastaera ekuteerera. Mushure mezvose, zvinogona kuve zvine hunyanzvi kuisa zvese zvatinoita isu vanhu mumabhokisi madiki akanaka!
Maitiro ese ekuteerera ane nzvimbo muhupenyu hwedu, asi zvinobatsira kuziva kuti ndeapi atinofanirwa kunge tichigadzira nekuvaka, uye ndeapi atingangoda kurega kuita akawanda kudaro.
Iye zvino zvawave unoziva gumi emhando huru dzekuteerera, unogona kuongorora maitiro ekutaurirana aunonyanya kugadzikana nawo wotanga kubazi!
ndinofanira kumirira kwenguva yakareba sei kudanana mushure mekurambana
dolph ziggler uye lana pamwechete
horo yemukurumbira wwe 2015
maitiro ekuchengetedza shanduko ichienda